लन्डन एक जोडी को रूप मा | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | लन्डन, रोमान्टिक
वर्षको यो समय अ English्ग्रेजी राजधानीको लागि धेरै राम्रो समय हो। यो शहर राम्रो मौसमको आनन्द लिन्छ र सँधै खैरो र आँधीबेहरीले भरिएको शहरमा हुने गर्दछ, जब सूर्यले आफ्नो नागरिकहरू उदय हुन्छ र यसको तातो आनन्द लिन्छ।
भ्रमण, डिनर, पार्क र महलहरू, प्रदर्शनीहरू, चाडपर्वहरूको माध्यमबाट हिंड्छन्। लन्डन सबै वर्ष को एक धेरै प्रदान गर्दछ र यदि तपाईं जोडीको रूपमा जानुहुन्छ भने तपाईं सोच्न र केहि चयन गर्न सक्नुहुन्छ विशेष गरी रोमान्टिक गतिविधिहरू, ती तस्बिरहरू रोमान्टिक पोस्टकार्डहरूको रूपमा अविस्मरणीयको रूपमा छोड्छन्। हाम्रो सूचीमा उत्तमबाट खराब कुनै अर्डर छैन त्यसैले एक नजर राख्नुहोस् र आफ्नै निर्माण गर्नुहोस्।
1 नागिन लिडो
2 सानो भेनिस
3 कोलम्बिया रोड
4 सेन्ट प्यानक्रस स्टेशन
5 हाइड पार्कमा घोडा सवारी
6 ग्रीनविच पार्क
7 सेन्ट पल क्याथेड्रल
8 रोमान्टिक डिनर, टोस्ट र टीहरू
यो हाइड पार्कमा छ र स्थानीय मानिसहरूले कम्तिमा एक शताब्दी को लागी सवारीको आनन्द उठाए। धेरै जोडीहरू शनिबार यहाँ आउँछन्, आफ्नो खुट्टा पानीमा राख्नुहोस् वा साना डु boats्गामा सवारी गर्नुहोस्। र जब चियाको समय हुन्छ उनीहरू लिड क्याफे बारमा जान्छन्।
यो एक छ पोखरी जुन केवल मे र हप्ताको सात दिन जून १ देखि सेप्टेम्बर १२ मा मात्र खुल्छ। क्याफेटेरियामा पोखरीको टेबुलहरू छन् त्यसैले तपाईं या त कफी, चिया वा रातो दाखमद्यको गिलास पिउन सक्नुहुन्छ। नजिकै स्विमिंग क्लब छ जुन इ England्ग्ल्यान्डको सब भन्दा पुरानो हो र जहाँ मानिसहरू प्रत्येक दिन बिहान 1 देखि :12: :6० बिहान तैरन्छन्। जाडोमा पनि। र हो, पानी सफा छ किनकि यो हरेक हप्ता परीक्षण गरिन्छ।
नागिन Lido बिहान 10 देखि साँझ open सम्म खुल्ला यद्यपि तिनीहरूले तपाइँलाई प्रवेश गर्न दिउँसो :5: let० सम्म। यसको मूल्य छ प्रति वयस्क 4० पाउन्ड जे होस् pm बेलुका पछि रेट drops, १० पाउन्डमा खस्छ। पूरा दिन भाडामा cha 4. costs० खर्च लाग्छ। तपाईं ट्यूबमा दक्षिण केन्सिington्टन स्टेशनमा बन्द हुँदै आइपुग्नुभयो।
रोमान्टिक पैदल र सूर्यको केही खाजाको लागि, हिड्न यो हुनुपर्छ नहरहरूले घेरिएको शान्त वातावरण जसमा सुरम्य बारहरू सारिन्छ। मुख्य नहरसँगै क्याफेहरू र बारहरू र रेजिन्सी वास्तुकला शैलीमा धेरै घरहरू छन्। त्यहाँ दुई ठूला नहरहरू छन्, ग्रान्ड युनियन र रेजेन्ट र प्याडिdingटनको बेसिन जुन ठूलो र सुन्दर पोखरीमा परिणत हुन्छ, सम्पूर्ण क्षेत्रको मुटु, ब्राउजि। पोखरी।
यहाँ बस्ने महँगो छ र यो एकदम राम्रो छ तर यो एक महान पर्यटक पैदल र प्रेममा एक जोडी को लागी, महान हो। हिंड्न अझ जान सक्छ र खुट्टा मा सानो भेनिस छोड्न एक सुन्दर आधा घण्टा पैदल यात्रामा पार्क पुग्न।
तपाईं डु boat्गा पनि लिन सक्नुहुन्छ, वाटरबस, जो नहरबाट तल झिड्याउन जान्छ र क्यामडेम जान्छ। तपाईं बेकेरलू लाइनमा वारविक एभिन्यू स्टेशनमा बन्द गरेर सबवेमार्फत त्यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं होटेलमा बस्नुहुने छैन र तपाईं एउटा पर्यटक भाडा अपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग तपाईंको सम्पूर्ण सम्पत्तिको घर हुनेछ। किराना सामान किन्नु एक बाध्यता हो र तपाई आफ्नो पार्टनरका लागि लाभ लिन र फूलहरू किन्न पनि सक्नुहुनेछ। गुलदस्ता किन्नको लागि राम्रो ठाउँ हो कोलम्बिया रोड फूल बजार। मात्र आइतबारमा खुल्छ र यो पूर्वी लन्डनमा छ तर यो फूलहरूको बीचमा हिड्नको लागि उत्तम छ।
साथै त्यहाँ एन्टिक पसल, आर्ट ग्यालरीहरु र केहि कपडा स्टोरहरु छन् यहाँ वरिपरि त हिंड्ने अधिक पूर्ण छ। उदाहरणका लागि, एज्रा स्ट्रिटमा तपाई लिली भेनिली भनिने प्यारो क्याफेमा बस्न सक्नुहुनेछ र कफ वा चियाको साथ तपाईंको केकको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। अति उत्तम!
सेन्ट प्यानक्रस स्टेशन
सबवे स्टेशन बारे रोमान्टिक के हो भनेर तपाईं सोचिरहनुभएको हुन सक्छ तर त्यहाँ केहि हुन्छ। यहाँ एक लुक्छ नौ मिटर अग्लो मूर्तिकलाले एक जोडी प्रतिनिधित्व गर्दछ अंगालो ठूलो कोमलता संग। पक्कै पनि तपाईं यस स्टेशन मार्फत केही समय यता जान सक्नुहुनेछ जब तपाईं आफ्नो केटा वा केटीसँग गर्नुहुन्छ तब रोक्नुहोस् र तस्वीर लिनुहोस्।
र किनकि तपाईं त्यस स्टेशनमा हुनुहुन्छ तपाईं मा यात्रा समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ Searcys सेन्ट Pancras शैम्पेन बार। बार 98 meters मिटर लामो छ, हो, तपाईंले त्यो सहि पढ्नुभयो, र तिनीहरू कम से कम सेवा दिइन्छ यस आत्मा पेय को १ varieties प्रकारहरु।
हाइड पार्कमा घोडा सवारी
यदि तपाईं एक महान सवारी हुनुहुन्छ वा होइन भने केही फरक पर्दैन, तपाईं जहिले पनि घोडा भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ र एउटा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ रोमान्टिक हर्सब्याक लन्डनको सबैभन्दा लोकप्रिय पार्कहरू मध्ये एकमा सवारी गर्दै। यो सेवा यहाँ एकल राइडर्स वयस्क वा बच्चाहरु र समूहहरु को लागी, सबै वर्ष प्रदान गरीन्छ।
सेवा बिहान :7::30० मा यसको ढोका खोल्छ र हप्ताको हरेक दिन साँझ5बजे बन्द हुन्छ। अघिल्लो अनुभव आवश्यक छैन किनकि घोडा धेरै शान्त छन्। यदि तपाईंलाई यो विचार मनपर्दछ भने, तपाईं मौसम जाँच गर्न सक्नुहुन्छ आरक्षण र भुक्तानी अनलाइन वा फोन गरेर अघि र पछिको पछि। यदि तपाईं यो धेरै समय अघि नै गर्नुभयो भने, तपाईं जहिले पनि एक हप्ता अघि सूचित गरेर परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ। पैसा फिर्ता गरिएको छैन, अन्यथा।
यो सस्तो सवारी छैन किनकि सवारी पाठ प्रति वयस्क लागत प्रति घण्टा १०103 पाउण्ड। यदि तपाईं अझ विशेष कुरा चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले १ 130० पाउन्ड तिर्नु पर्छ। दर मा जुत्ता, एक टोपी र एक जलरोधक कोट शामेल छ। दिमागमा राख्नुहोस् कि सप्ताहन्तमा त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् त्यसैले तपाईले एक हप्ता भन्दा बढि अघि नै बुक गर्नु पर्छ।
यो शाही पार्क र एक हो जब तपाईं पहाडको माथिको माथि जानुहुन्छ तपाईंसँग लन्डनको अद्भुत दृश्य हुन्छ। वसन्त theतुमा पार्क फूलहरूले भरिएको छ, जडिबुटी, जंगली फूलहरू, अर्किडहरू छन्, र यदि तपाईं समुद्री इतिहासमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ भने यसमा ओल्ड रॉयल नेवल कलेज र राष्ट्रिय समुद्री म्यूजियम छ।
न त म तपाईंलाई भन्दैछु जब बैजनी फूलहरू सहित यसका साना रूखहरू फूल्छन् र फूलहरू पातलो मार्गहरू र बेंचहरूमा खस्छन्। यो एक सौन्दर्य हो!
एउटा चर्च जहिले पनि रोमान्टिक हुन्छ यदि तपाईको उद्देश्य "पवित्र" सम्बन्ध राख्नु हो भने। र यो विशेष चर्च धेरै सुन्दर छ आधा गुम्बदको शीर्षमा तपाईं आफ्नो मुटुको साथ चढ्न सक्नुहुन्छ, २259 steps चरणहरू हुँदैछन्, र लन्डनको चिन्तनले तपाईंको हातलाई अर्डर गर्नुहोस् ...
क्याथेड्रल पुग्न सजिलो छ किनकि यसको आफ्नै मेट्रो स्टेशन छ। यो सोमबार देखि शुक्रवार बिहान :8: .० देखि 30::4० बिहान र बेलुका खुल्छ गुम्बजमा प्रवेश गर्न १ p पाउन्ड लाग्छ.
रोमान्टिक डिनर, टोस्ट र टीहरू
यदि तपाईं आफ्नो केट / केटी संग बार मा बाहिर जान चाहानुहुन्छ तपाईं उहाँ वरिपरि पैदल लिन सक्नुहुन्छ कनॉट होटल। यो पट्टी एक रहस्यमय र एकान्त कुना हो जुन तपाइँ प्रेम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं ती मध्ये एक छनौट गर्नुहोस् Panoramic विचारहरु संग खानु त्यसो भए Girkin मा Searcy भोजनालय सबै भन्दा राम्रो छ, यसको गिलास गुम्बज संग आकाश र शहर खुला छ।
के तपाइँ एक विशिष्टमा पिन्टको विचार मन पराउनुहुन्छ? ब्रिटिश पब? ठिकै छ, प्रस्ताव धेरै छ तर क्लर्कनवेलमा त्यहाँ छ फक्स र एch्कर पब, यसको सरल र रसीला मेनूको साथ, १००% ब्रिटिश। अन्तमा, क O'clock बजे चिया तपाईं यसलाई लण्डनको व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि कुनामा स्वाद लिन सक्नुहुनेछ (सब भन्दा क्लासिक होटेल भित्र वा हरोडमा पनि उनीहरूले उत्तम सेवा दिन्छन्)।
के तपाई फोटोग्राफ गर्नुहुन्छ जहाँ पोष्ट सुरु हुन्छ? त्यो सुन्दर अ hill्ग्रेजी पहाड कहाँ लुकेको छ? यो छ रिचमंड हिल, टेम्स मेन्डरको उत्तरमा, रिचमण्ड प्यालेसको वरिपरि र उही नामको पार्क। यो अद्भुत दृश्य १race औं शताब्दीमा डिजाइन गरिएको टेरेस वाकबाट हुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » लन्डन » लन्डन एक जोडी को रूप मा